Fahafantarana ny zava-misy amin'Andriamanitra I | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
"Fa ny Tenin 'Andriamanitra dia velona sy matanjaka ary maranitra noho ny sabatra roa lela ary mifototra mandra-pisarahana ny fanahy sy ny fanahy, ny mareroma sy ny tongony ary mpitsara ny eritreritra sy ny fahatsapan'ny fo" (Heb. 4,12). Hoy i Jesosy: "Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14,6). Hoy koa izy: "Fa izao no fiainana mandrakizay, dia hahafantatra anao ilay Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao." (Jaona 17,3). Mahalala sy mahatsapa an Andriamanitra - izany no maha fiainana.
Noforonin'Andriamanitra hanana fifandraisana aminy isika. Ny tena fototry ny fiainana mandrakizay dia ny hoe "mahalala an 'Andriamanitra sy mahalala an'i Jesosy Kristy" izay nirahiny. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fandaharana na fomba iray, fa amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny olona iray.
Rehefa mivoatra ilay fifandraisana dia lasa mahazo sy mahatsapa ny zava-misy Andriamanitra isika. Tena Misy aminao ve Andriamanitra? Miaina izany isan'andro isan'andro ve ianao?
Araho an'i Jesosy
Hoy i Jesosy: "Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14,6). Aza adino fa tsy niteny i Jesosy hoe "hasehoko anao ny lalana" na "Homeko anao ny làlan-jotra" «Izaho no làlana» , Rehefa manatona an'Andriamanitra hitady ny sitrapony isika, inona no fanontaniana mety hanontanianao azy? Tompo ô asehoy ahy ny zavatra tiko ataonao? Rahoviana, aiza, aiza ary iza? Ampisehoy ahy ny zavatra hiseho. Na: Tompoko, ambarao kely fotsiny aho, dia hotanterahiko. Raha manaraka an'i Jesosy indray andro any ianao, ho marina ve ianao eo afovoan'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Raha Jesosy no lalana antsika, dia tsy mila torolàlana hafa na sarintany isika.
Manasa anao handray anjara amin'ny asany miaraka aminy Andriamanitra
"Raha katsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha, dia hianjera aminao izany rehetra izany. Aza matahotra intsony rahampitso, satria rahampitso dia hikarakara azy. Ampy izay isan'andro dia manelingelina azy " (Matio 6,33: 34).
Matoky tena tanteraka Andriamanitra
ka maniry ny hanaraka an’Andriamanitra indray andro any manaraka
koa hanaraka izany ianao na dia tsy manana tsipiriany aza ianao
ka avelanao ho lalàko izany
"Satria Andriamanitra no miasa ao aminareo, maniry sy hahavita, araka ny sitrapony" (Filipiana 2,13). Ny fitantarana ao amin'ny Baiboly dia mampiseho fa Andriamanitra dia mandray andraikitra mandrakariva amin'ny fampandraisana anjara ny olona amin'ny asany. Rehefa mahita ny Ray miasa amin'ny manodidina antsika isika dia izao no fanasanay avy aminy hanatevin-daharana azy amin'ity asa ity. Manoloana an'io dia azonao tadidy ve ireo fotoana nanasan'Andriamanitra anao hanao zavatra fa tsy namaly ianao?
Andriamanitra miasa foana aminao
"Fa hoy ny navalin'i Jesosy azy: Ny raiko miasa mandraka androany, ary izaho koa dia miasa ... Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny zanaka dia tsy mahazo manao izay tiany, fa izay irery mahita ilay raim-pianakaviana manao izy; satria manao izany, ny zanaka dia mba manao koa. Satria tia ny zanaka ny ray ary maneho azy ny zavatra rehetra ataony ary hampiseho azy amin'ny asa lehibe kokoa aza dia ho gaga ianao " (Jaona 5,17, 19-20).
Ity misy maodely iray ho an'ny fiainanao manokana sy ho an'ny fiangonana. Ny zavatra noresahin'i Jesosy dia ny fifankatiavana am-pitiavana izay nahavitan'Andriamanitra ny tanjony. Tsy mila mamantatra izay tokony hatao ho an'Andriamanitra isika satria manodidina antsika foana Izy. Mila manaraka ny ohatra omen'i Jesosy isika ary hijery an'Andriamanitra izay ataony isaky ny misy. Adidintsika avy eo ny mampiaraka antsika amin'ny asany.
Jereo ny toerana fiasan'Andriamanitra ary mankanesa any aminy! Andriamanitra dia mitady fifandraisana fitiavana maharitra miaraka aminao, izay tena misy sy manokana: «Fa Jesosy namaly azy hoe:" Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ". Ity no didy avo indrindra sy lehibe " (Matio 22,37: 38).
Ny zava-drehetra amin'ny fiainanao amin'ny maha-Kristiana anao ao anatin'izany ny fahafantarana azy, ny fanandramana azy ary ny fahafantarana ny sitrapony dia miankina amin'ny kalitaon'ny fifankatiavanao amin'Andriamanitra Azonao atao ny mamaritra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fitenenana hoe "tiako ianao amin'ny foko rehetra"? Noforonin'Andriamanitra hanana fifandraisana am-pitiavana Aminy isika. Raha tsy mety ny fifandraisana dia hanao toy izany koa ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainana. Aza diso, ny fifankatiavana amin'Andriamanitra dia zava-dehibe kokoa noho ny antony tokana rehetra amin'ny fiainanao!
Boky fototra: «Manandrama Andriamanitra»